Sheekh Shaakir oo loo doortay madaxweynaha Galmudug ee Ahlu-Sunna – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Sheekh Shaakir oo loo doortay madaxweynaha Galmudug ee Ahlu-Sunna * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Ardaan Yare on 29th January 2020
Doorashada Madaxwaynaha iyo Ku Xigeenkiisa ee kasocota Xero InJi ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ku guulaystey Xilka Madaxwaynaha Galmudug Sh,Maxamed Shaakir Cali Xasan kadib markii ay tanaasuleen labadii Musharax ee latartamaysey.
Baarlamaanka cusub oo ay shalay soo xuleen hoggaanka Ahlusunna.waxaana Xildhibaanadaas ay cod gacan taag ah ku ansixiyeen inuu Shaakir noqdo Madaxwaynaha ugu horeeya sedexda madaxwayne ee la filayo maalmaha soosocda inay Galmudug yeelato.
Sidookale Madaxwayne ku Xigeenka ayaa waxaa ku guulaystey Maxamed Shuuke kadib markii uu sidoo kale uu tanaasuley musharaxii latartamayey Maxamed Yaxye Faarax.
Xaalada khilaafka doorshada Galmudug ee galmudug ayaa cirka isku sii shareertay,waxaana laag cabsi qabaa in Galmudug laag dhiso saddex madaxweyne